भारतका सबैभन्दा धनी अम्बानीको ताज संकटमा, सामान्य परिवारमा जन्मिएका अडानी कसरी बने उनीभन्दा ‘धनी’ ? « Bizkhabar Online
भारतका सबैभन्दा धनी अम्बानीको ताज संकटमा, सामान्य परिवारमा जन्मिएका अडानी कसरी बने उनीभन्दा ‘धनी’ ?
19 February, 2022 1:04 pm
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति को हो ? अवश्य पनि सबैले भन्नेछन् कि मुकेश अम्बानी देशको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् । तर, अहिले उनको गौतम अडानीसँग कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । हालै फेब्रुअरी ८ मा गौतम अडानीको सम्पत्ति मुकेश अम्बानीको भन्दा बढी भएको थियो । गौतमको सम्पत्ति बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण उनको अर्को कम्पनी अदानी विल्मार सेयर बजारमा सूचीकृत भएको थियो ।
सामान्य परिवारबाट आएका अडानी
मुकेश अम्बानीले रेडिमेड साम्राज्य पाएका थिए । धनको कमी नभएको घरमा उनको जन्म भएको थियो । यो पनि सत्य हो कि उनका बुबाले धेरै संघर्ष गरे र त्यसपछि मुकेश अम्बानीले आफ्नो समझदारीले व्यापारलाई धेरै बढाए । तर, यदि गौतम अडानीको कुरा गर्ने हो भने उनी अहमदाबादको रतनपोल इलाकामा एक साधारण परिवारमा जन्मिएका थिए, जो कपडाको व्यापार गर्थे । गौतम अडानीले गुजरात युनिभर्सिटीबाट कमर्स डिग्री हासिल गर्ने सोचमा आफ्नो पढाइ सुरु गरे । तर, पढाईमा मन लागेन र मुम्बईमा हीराको व्यवसायमा हात हाल्न आफ्नो पढाइ बीचमै छोडे
अडानीको व्यापारमा प्रवेश
गौतम अडानीले प्लाष्टिकको दानाबाट मोल्ड बनाएर व्यवसाय सुरु गरेका थिए त्यसपछि उनले अदानी एक्सपोर्ट्स स्थापना गरे । त्यसयता धेरै व्यवसायमा हात हालेपछि विमानस्थल, बन्दरगाह, हरित ऊर्जा, खानी लगायतका क्षेत्रमा व्यवसाय सुरु गरे त्यसपछि, भाग्यले यस्तो परिवर्तन गर्यो कि उनी कोइला, बिजुली, घरजग्गा, कृषि उत्पादन, तेल र ग्यास, वित्तीय सेवा, डाटा सेन्टर, पोर्ट र टर्मिनल र हरित ऊर्जा जस्ता कम्पनीहरूको समूहको मालिक बने । उनले सन् २००० मा इन्डोनेसिया र अष्ट्रेलियामा कोइला खानी किनेका थिए । गत वर्ष फ्रान्सेली तेल कम्पनी टोटल एसई र अमेरिकाको वारबर्ग पिनकसले अदानीको ऊर्जा कम्पनीहरूमा पैसा लगानी गरेका थिए । मेमा अदानी ग्रनले नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय सफ्टब्याक करिब २६ हजार करोड रुपैयाँमा किनेको थियो । हालै स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको अदानी विल्मार एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय कम्पनी हो ।
अम्बानीको ताज खतरामा !
मुकेश अम्बानी लामो समयदेखि भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति रहँदै आएका छन् । तर, ८ फेब्रुअरीमा उनको सम्पत्ति मुकेश अम्बानीको भन्दा बढी पुगेसँगै ब्लूमबर्गको वल्र्ड र्याङ्किङ अनुसार अडानी १० नम्बरमा पुगेका छन् भने अम्बानी ११ नम्बरमा झरेका छन् । अदानी समूहका ७ कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत भएका छन् । पछिल्ला दुई वर्षमा अदानी समूहले हरित ऊर्जा र पूर्वाधारको व्यवसाय विस्तार गरेको कारण केही कम्पनीको सेयर ६०० प्रतिशतले बढेको छ । हुरुन इन्डिया रिच लिस्टमा अनुसार१ लाख करोड रुपैयाँको बजार मूल्यका पाँच कम्पनीहरू स्थापना गर्ने गौतम अदानी एकमात्र भारतीय हुन् । अनुवाद गरिएको